Garka jar: Baro qaababka timaha wajigaaga | Ragga Stylish
Ma taqaanaa garka kala jaray? Kaliya waxaa lagama maarmaan ah in cagta la saaro wadada si loo hubiyo in timaha wajiga ay moodada yihiin. Mana aha kaliya gadhka caadiga ah, laakiin timaha wajiga noocyadooda oo dhan.
Aan aragno garka jarista ee aad wajiga saari karto iyo sida loo sameeyo. Noocyada kala duwan ee shaarubaha, riyaha iyo garka buuxa oo laga yaabo in laga helo midka kuugu xiisaha badan.
1 Waa maxay jarista gadhka?
2 Noocyada Shaarbaha
3 Noocyada Knob
4 Hababka gadhka
4.1 Gadhka gaagaaban, sharad aamin ah
Waa maxay jarista gadhka?
Muujinta gadhka waxa loola jeedaa sawirka raaca timaha wejiga ee wejiga. Yaan lagu wareerin dhererka. Sawir gacmeedkan ama qaabkani wuxuu noqon karaa mid dabiici ah, iyadoo faragelin yar ama aanad ku jirin qaybtaada. Laakiin rag badan ayaa doorbida inay xirtaan muuqaal shaqo badan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad raadiso dabiici ahaanta natiijada.
Meel muhiim ah oo gadhka ka jaran ayaa ah dhinacyada. Beddelidda dhererkiisa iyo dhumucdiisuba waxay ka dhigi kartaa gadhka (iyo sidoo kale sidoo kale wejiga) inuu gebi ahaanba ka duwan yahay. Si kastaba ha noqotee, aagga dhexe ayaa sidoo kale loo beddeli karaa siyaabo badan oo ku habboon doorbidkaaga. Qashin-qubka, Waad qeexi kartaa aagaga kala duwan ee timaha wajigaaga hadba sida aad u kala jeceshahay, labada dhinac iyo qeybta dhexe ee daanka.
Garka qayb ahaan, mid ama in kabadan qaybo kamid ah timaha wajiga ayaa la xiiray (hubinta helitaanka natiijo isku eg, dabiici ahaan). Waxaa jira iskudhafyo fara badan, oo sii kordha xitaa haddii aan ku darno siyaabaha kala duwan ee xadeynta meelahaas.
Shaarubahu wuxuu dabooli karaa bushimaha kore oo dhan qaab ahaan 80-yadii iyo xitaa hoos u dhaadhac dhinacyada si aad u sameysid fardo fardood ah oo geesinimo leh. Haddii aad doorbideyso wax khafiif ah, waxaad ku gooyn kartaa dusha sare shaarib caato ah oo leh vibes xoog leh oo dabiici ah.
Miyaad ku dhiiran kartaa inaad isku xirto bararba dhinacyadeeda iyo shaarubaha? Qaabkani waa sida gadhka gaaban laakiin leh gadh xiiran. Sawirka wuxuu ka marayaa hal dhag ilaa kan kale iyada oo loo marayo bushimaha kore. Haddii aad jeceshahay fikradda laakiin aad doorbideyso in guntimaha dhinaceeda ay yeeshaan magac yar, hubi in garka laga jaro meelaha gubta. Ka fikir shaarubaha shaarubaha marka hore hoos u dhacaya ka dibna daanka kor u qaadaya, laakiin, si ka duwan goosigii hore, ma gaarayo bararka dhinacyada, laakiin wuxuu istaagayaa qaybta ugu ballaaran ee daanka.
Sidan oo kale, xulashooyinka aad u leedahay shaarubaha waa:
Shaarib khafiif ah
Shaarbo leh barar
Khadadkaas kore waxaad ku arkeysaa buro barroosinka oo shaarib khafiif ah leh. Xaqiiqdii waxaad sidoo kale ogtahay nooca caadiga ah, kaas oo korka iyo hoosta ay ku xiran yihiin abuurista qaab laba jibbaaran ama wareegsan. Haddii aad doorbideysid cows go'an ama shaarib sabeynaya, tixgeli qaabka Royale (oo si siman ugu ballaadhan dusha iyo hoosta) ama Van Dyke (oo ka ballaadhan xagga sare).
Waxaad sidoo kale kori kartaa riyaha oo aan shaarib lahayn. Waxay ku saabsan tahay xiirista wax kasta marka laga reebo garka oo waxaa la siin karaa ballac la mid ah garka ama loo sameyn karaa inuu u kaco dhinacyada ama aad ugu dhowaato iyaga. Qaabkan waxaad ku dari kartaa balastar timo bushimaha hoose ama waxaad xadidi kartaa xariiq ka timaadda macbudka kan kale. Ugu dambeyntiina, waxaad sidoo kale ku soo gaabin kartaa dhinacyada si aad uga dhigto mid cidhiidhi ah. Waxay u cariiri kartaa sida xarriiq toosan oo hoos udhigta bartanka garka.
Aan fiirino garka jarista riyaha:
Buro Classic (kor iyo hoos ku xiran)
Ilkaha aan shaarubaha lahayn oo ay barar ku yaalliin
Ilkaha shaarubaha aan lahayn shaarib la'aan
Dhamaan timaha wajiga waa loo ogol yahay inay koraan. Waa lagama maarmaan in hiddo-wadaha inbadan lasocdo, gaar ahaan si loo gaaro gadh dheer iyo qaro weyn. Marka ay timaado gadhka dhaadheer, muhiim maahan in faragalin badan lagu sameeyo khadadka. Waxa kaliya ee badanaa la sameeyo waa in lagu xaddido qoorta (iyo meelaha intiisa kale marka loo baahdo oo keliya). U oggolow inay ku korodho xawaareheeda waxay u shaqeysaa garka, laakiin dabiici ahaan waa inaad ku haysaa timo aan amar lahayn maqaska oo aad isticmaasho alaab bidaarta gadhka.
Si kastaba ha ahaatee, waad beddeli kartaa khadadka dabiiciga ah iyadoo la kaashanayo manjarkaaga haddii aad u aragto inay lagama maarmaan tahay. Ragga qaar ayaa xariiqa dhabanka hooseeya maxaa yeelay habkaas waxay umuuqdaan kuwa ka macaan badan, waxayna keeneysaa gadh kaas oo aagga dhexe uu dhinac kaga yaalo. Hoos u dhigista shaarubaha iyo dhinacyadu waxay sababi doonaan garka oo xoog badan, sida ay tahay kiiska hoosta la gashado.
Gadhka gaagaaban, sharad aamin ah
Haddii aad doorbideyso in gadhku ku sii dhawaado daanka, waxaad u baahan tahay waa gadh gaaban. Badanaa qaybaha kala duwan waxaa lagu xadeeyaa makiinad (dhinacyo barar, shaarib, garka), iyaga oo ku soo koobaya dhadhaminta, laakiin ka taxaddar inaad ku dhaafto, maxaa yeelay goynta ayaa umuuqan karta mid dabiici ah. Waa mid ka mid ah kuwa garka jajarka ah ee u muuqda ragga oo dhan. Sidoo kale, maadaama ay tahay qaab dhexdhexaad ah, waxay ku habboon tahay labiska caadiga ah iyo muuqaalka muxaafidka ah labadaba.
Sidaa awgeed, waxaad ku sharxi kartaa:
Gadh saddex maalmood ah (fududahay in la helo umana baahna sawir gaar ah)
Garka dabiiciga ah (waxaa lagugula talinayaa inaad xadido dhabannada iyo qoorta xoogaa)
Gadhka dhexdhexaadka ah (khadka dhabannada xoogaa hoos ayaa loo dhigay)
Gadhka oo hooseeya (khadka dhabanka ayaa si weyn hoos loogu dhigay)
Gadhka gaagaaban (qaybaha kala duwan waa loo cidhiidhyay intii la doono, laakiin waxaa lagugula talinayaa inaad si dhexdhexaad ah u dhaqanto)
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Garka oo gooya